IINTSOMI EZILI-10 MALUNGA NOBONGO BABANTU - IMVELISO
Iintsomi ezili-10 malunga noBongo baBantu
Kutshanje, i imbonakalo from journl.com yapapashwa ebonisa ukungachaneki kwe-10 yeentsomi eziqhelekileyo malunga nengqondo yomntu. Kuyathakazelisa ukwazi ukuba kwiminyaka apho kubalulekile ukuqonda ubuchwephesha bempumelelo, sisazamkela ezi ntsomi. Emva kwayo yonke loo nto, ukufunda ukusebenzisa amandla engqondo ngokukuko kubalulekile ekufezekiseni iinjongo. Ezi ntsomi zilandelayo zibhekiswa kwi-infographic ngokufutshane. Eli nqaku lihamba kancinci ngokunzulu.
Lixesha lokuba siyeke ukukholelwa kwiintsomi ezingezizo malunga nobuchopho bethu. Abanye banokwenza umahluko omkhulu kwindlela esizijonga ngayo izinto kunye nempumelelo yethu iyonke.
Intsomi # 1: Sisebenzisa kuphela iipesenti ezili-10 zeeBongo zethu
Le ntsomi yeyona ixhaphakileyo ekukholelwayo ukuze siqale ngayo.
Intsomi kusenokwenzeka ukuba yayivela kuWilliam James, ugqirha wezengqondo waseMelika kwii-1900s zokuqala. Xa uJames wayengu-q ukhutshiwe Ngelixa esithi, umntu ophakathi kunqabile ukuba afezekise kodwa isabelo esincinci samandla akhe apheleleyo, isicatshulwa siye satshintshwa. Kuqala kutshintshelwe kwi, iipesenti ezili-10 zamandla ethu, emva koko kwahlengahlengiswa kwipesenti ezili-10 zeengqondo zethu. Nangona singangqina ngokwenzululwazi ukuba abantu basebenzisa ngaphezulu kwepesenti ye-10 yeengqondo zabo, le ntsomi ikholelwa ukuba iyinyani ngabantu abaninzi.
Intsomi # 2: Ubuchopho buyancipha njengoko sikhula
Ezinye izakhono zengqondo ziyaphucuka ngokuhamba kweminyaka. Isigama, ukuqonda ulwimi, ukucinga nzulu, kunye nolawulo lweemvakalelo zimbalwa zeendawo eziqhubeka nokukhula.Intengiso
Izifundo zamva nje zibonisa ukuba ingqondo yenye indlela yokwandisa ukusebenza kwengqondo. Izifundo zicebisa ukuba ukusebenza kwengqondo kuphuculwe kwiindawo ezithile zabathathi-nxaxheba emva kwenkqubo yokunciphisa uxinzelelo lweeveki ezisibhozo. Abathathi-nxaxheba babonisa ukwanda kwento engwevu Iiklasta ezilawula imisebenzi yeemvakalelo kunye nokuqonda ngokwasentlalweni. Uphononongo lubonisa ukuba nengqondo kunokuba luncedo ekunyangeni uxinzelelo kunye noxinzelelo lwasemva koxinzelelo.
Intsomi # 3: Ukonakala kweBongo kuhlala kusisigxina
Nangona kuyinyani ukuba umonakalo omkhulu wobuchopho awunakuze uphilise ngokupheleleyo, imisebenzi enikwe amandla zindawo ezonakeleyo inokuphucula, kwaye unxibelelwano olulahlekileyo phakathi kwee-neurons lunokuphinda ludibane.
Eyona nto iphambili kukuba ii-neurons ezonakeleyo azinakukhula kwakhona. Nangona kunjalo, unxibelelwano olonakeleyo phakathi kwee-neurons ekugqibeleni luye lwanxibelelana kwakhona, ukuguqula umonakalo. Xa ii-neurons zonakalisiwe, ingqondo inokuthi iphinde isebenzise ezinye iinxalenye ekwenzeni umsebenzi olahlekileyo. Imisebenzi enjengokuthetha inokusingathwa lelinye icandelo lobuchopho xa inxenye leyo ingafunda umsebenzi ngokuphindaphinda.
Inkolelo # 4: Ubunzima bunzima
Inyani yile yokuba ubuchopho bunokufakwa kwi-wired kwakhona. Unyango lukhuthaza iinxalenye ezintsha zobuchopho, ezingadibaniyo nesakhono, ukuthatha intsebenzo xa icandelo elinxulumene nayo lingenako. Umzekelo, ukuva kwendoda engaboniyo kuyaphucuka xa ukungaboni kungabonakali. Ixhoba lokufa icala linokuthetha ngokufundisa indawo engaqhelekanga enxulumene nokwenza umsebenzi ukulawula intetho.
Andikuthandi ukuba ndedwa
Ukwenza iingcingo kwakhona kwingqondo yakho kunokwenzeka ukuba utshintshe imikhwa. Iingqondo zifunda ngokwenza okuphindaphindayo. Ukuba ufuna ukuyeka ukutshaya, unokuqeqesha ingqondo yakho ukuba iyeke ukuthumela imiqondiso eyenza ukuba iminqweno inganyamezeleki. Kuthatha ixesha kunye nokuphindaphinda ukugcina ingqondo yakho.Intengiso
Intsomi # 5: Abantu abaShiyekileyo kuBreyini baCwangcisiwe abantu abaNtsundu ngeeBlue bayile
Ukwahlulwa kwengqondo ye-hemispheres ngomnye umzekelo obalaseleyo wentsomi eyatshintshwa ngabanye emva koko yafumana udumo de ikholelwa ukuba iyinyani.
Inyani yile amacala omabini ulawulo lwakho lobuchopho uninzi lwemisebenzi. Umzekelo, xa usenza izibalo, zombini ii-hemispheres zengqondo yakho zisetyenzisiwe. Ukuba besinokukholelwa ukuba i-hemisphere yasekhohlo ilawula ingcinga kwaye i-hemisphere elungileyo ilawula ubuchule, ngekhe ibe sengqiqweni ukusebenzisa icala lasekunene. Emva kwayo yonke loo nto, izibalo zonke zinengqondo, akunjalo?
Intsomi # 6: Inkumbulo yakho yiAkhawunti eyiyo yoko ukubonayo kunye namava
Sikhumbula iinkumbulo ezisuka kwingqondo. Ayizizo iingxelo zokwenyani zento eyenzekileyo. Xa sikhumbula imemori ithatha uhlobo lokugqibela esikhumbula ngalo inkumbulo. Oko kuthetha ukuba siphucula iinxalenye ezithile zememori kwaye sivumele ezinye iinxalenye ukuba ziphele ngasemva.
Ukuba sikhumbula amava abuhlungu, iingqondo zethu zinokuthintela iindawo ezithile ukuzikhusela. Kukwabalulekile ukwazi ukuba iingcali zengqondo zikwazile ukufakela ngempumelelo iinkumbulo zobuxoki . Konke oku kuchaza ngcono ukuba kutheni abantu abaninzi benokubona isiganeko esinye, kodwa wonke umntu usikhumbula ngokwahlukileyo.
Intsomi # 7: Ukuphulaphula uMculo woMculo kuya kwenza uSana aBenobuchule
Kwiminyaka yoo-1950, ugqirha u-Albert Tomatis wabanga impumelelo ekunyangeni iingxaki zokuva ngomculo weklasikhi. Uye wasekela iziphumo zakhe kwithiyori eyakhiwe emva kokuba abafundi beekholeji abangama-36 baceliwe ukuba bamamele imizuzu eli-10 yonyana ka-Mozart ngaphambi kokuba bathathe uvavanyo lwe-IQ. Abafundi bafunyaniswe ngugqirha wengqondo owongameleyo, uGqirha Gordon Shaw, ukuba baphucule amanqaku abo e-IQ ngezibhozo. Ngokufunyenweyo, umphumo weMozart wabuyela ebomini.Intengiso
Akukho gqirha ukwazile ukuphinda iziphumo zophononongo okoko kwafunyanwa okokuqala. UGqr. Frances Rauscher, obandakanyeka kuphononongo lokuqala, ucebisa ukuba iziphumo azizange zithi ukumamela iMozart kwenze ukuba iqela likrelekrele. Endaweni yokuba bayifumene inyusa intsebenzo kwimisebenzi ethile yendawo kunye neyethutyana. Nangona kunjalo, intsomi yazalwa kwaye isaphila nanamhlanje.
Intsomi # 8: Imidlalo yeBongo iphucula iMemori yakho kunye neZakhono zokuQiqa
Kwithiyori, kubonakala ngathi iyavakala ukuba imidlalo yengqondo inokuyiphucula inkumbulo yakho kunye nokuqiqa ngokusebenzisa iinxalenye zengqondo ezilawula loo misebenzi. Nangona kunjalo, uphando lungqina ukuba oku akuyonyani.
indlela yokulala kwisikhululo seenqwelomoya
I-BBC yathatha inyathelo lokujonga le mbono. Kuphononongo lwabantu abangaphezu kwe-8,600, iminyaka eyi-18-60, ukusebenza kwengqondo kwimemori nakwizakhono zokuqiqa azizange ziphucule emva kokuthatha inxaxheba kathathu ngeveki, imizuzu elishumi ngosuku, kwimidlalo eyilelwe ukuphucula ezi zakhono. Intsomi iyadinwa.
Intsomi # 9: I-IQ yakho ihleli ngokufanayo kuBomi bonke
Ngaba uyakholelwa ukuba abanye abantu bazalwe bekrelekrele kunabanye kwaye ii-IQs azizukutshintsha? Ukuba kunjalo, akuwedwa. Nangona kuyinyani ukuba umgangatho we-IQ uvavanyo luza kubonisa ukwanda kancinci kobukrelekrele ngaphezulu kobomi bonke, ayaziswa ukuba ijika lokufunda lakhiwe kuvavanyo.
Izinto zovavanyo kwisixa semfundo ekulindeleke ukuba senzeke ngokuhamba kwexesha, emva koko zisiphungule, zisenza ukuba amanqaku abonakale ngathi ahlala engafani xa sinobukrelekrele.Intengiso
Intsomi # 10: Ubuchopho bakho busebenza bhetele phantsi koxinzelelo
Ithiyori yaziwa ngokubanzi, kodwa enyanisweni ingqondo yakho ayisebenzi ngcono phantsi koxinzelelo, ujolise ngakumbi kulo msebenzi.
Ngenxa yokuba ukongezwa kugxilwe kwenza abantu bacinge ukuba basebenze ngcono phantsi koxinzelelo, baya kulinda de kube ngumzuzu wokugqibela ukwenza umsebenzi. Uxinzelelo olubangelwa yingqondo ngelixa uphantsi koxinzelelo lwonyusa ukukhutshwa kwe-cortisol. Uninzi lwe-cortisol lunokuthintela ukufunda kunye nokwakheka kwememori kubangele iziphumo ezibi zexesha elide.
Ngoku ukuba uyazi i-10 iinyani eziqhelekileyo malunga nengqondo zichithwe, lixesha lokufundisa umhlaba. Ngexesha elizayo xa umntu ekuxelela ukuba balungile kwaye abanakwenza nto, uya kuba nempendulo efundileyo malunga nokuba kutheni bekwazi.
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: UAndrew Becraft ngeflickr.com
inceda ntoni iti eluhlaza
iikowuti ezidumileyo zika-albert einstein
batyeba njani abantu
ingakanani indawo ikunika i-onedrive
ungayifumana njani into engqondweni yakho
Umahluko phakathi kokusebenza ngokufanelekileyo
Umsebenzi Weengcebiso Ngamakhondo Iincwadi Indlela Yokuphila Ukufunda Ingqalelo